Kyrgyzstàna sy Ozbekistàna: Sakay Sy Maso Fahiny, Mpinamana Tsy Mifankafoy Ankehitriny? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Oktobra 2017 4:48 GMT
Nihitsoka tanaty ady toa tsy manam-pitsaharana momba ny tany sy rano, indray andro dia nandrahona hamaky ady amin'i Kyrgyzstàna sy Tajikistàna mpifanolo-bodirindrina aminy i Karimov, noho ireo drafitra fanorenana tohodrano goavana noeritreretin'ireo firenena roa mahantra ireo any amin'ny faritra ambony ao Ozbekistàna.
Manome andran-tsira momba ireo andro nanjombona teo amin'ny fifandraisan'ny roa tonta ny fihaonana iray teo amin'ireo filoham-panjakana fahiny fony mbola Firaisana Sovietika, natao tamin'ny 2015 tao Maosko, ka nandritra izany i Karimov no nanakiana an'i Atambayev filohan'i Tajikistàna tamin'ny fomba tena nahamenatra taorian'izay noheveriny ho tsinontsinona — na ny filoha Rosiana Vladimir Putin mafy fo aza dia hita ho nipararetra nanoloana ilay toedraharaha nanahirana.
Efa voajery in-1,3 tapitrisa ny lahatsary iray amin'ilay fifampiresahana nomena lohateny hoe “Tapitra ny Adin'i Karimov Atambayev” ary manasongadina fifandresen-dàhatra mivaivay teo amin'ireo Kyrgyz sy Ozbeky any anatin'ny faritra natao ho an'ny fanehoankevitra. Ny fifandraisana misy amin'ireo mpitarika dia afaka mametraka ny lantompeo amin'ny fifandraisan'ny vahoakan'ny roa tonta.
Vokatra roa manandanja avy amin'ilay fihanonana tamin'ny 5 Septambra no notaterin'ny EurasiaNet.org, tranonkala iray mifantoka amin'i Azia Afovoany:
Ny ampitso, samy namoha indray ny ampahany amin'ny sisintany iraisan-dry zareo ny tany roa tonta, sisintany nihidy nanomboka tamin'ny nisian'ny olana politika nanempotra an'i Kyrgyzstàna tamin'ny 2010. Olona an'arivony maro monina amn'ny andaniny sy ankilany amin'ilay sisintany no nanatrika ilay fanokafana.
Hoshimova nandeha avy eo ankavian'i Atambayeva ao anatin'ny sary eto ambany’.
Mbola mijanona hatrany ho fitondrana jadona mahery setra ihany i Ozbekistàna raha ny fenintra iraisampirenena no jerena, na eo aza ireo marika sasantsasany ahitàna ilay antsoina hoe “fihalefahana” amin'ny politika anatin'ny firenena.
Vaovao tsara ihany koa ho an'i Tajikistàna izany, izay mbola tsy notsidihan'i Mirziyoyev tao anatin'ny herintaona nahazoany fahefana, nefa koa feno fanantenana hoe an-dàlana ny hisian'ny fifandraisana tsaratsara kokoa.